लकडाउनः राहत र सामाजिक सञ्जाल | langtangnews.com
लकडाउनः राहत र सामाजिक सञ्जाल
Posted By: News News April 15, 2020
यतिबेला मुलुक ठप्प छ। हाम्रो देश मात्र होइन, विश्व नै ठप्प छ। कोरोना नामक नयाँ भाइरसको कारण विश्वमा एक खाले स्वास्थ्य संकटकाल जस्तो घोषणा भएको छ। कोरोना भाइरसका कारण विश्वमा दैनिक सयौंको मृत्यु भइरहेको छ। हजारौंको संख्यामा कोरोना संक्रमणको संख्या बढ्दो छ। यसको निदानको लागि विश्वले औषधी पत्ता लगाउन सकेको छैन। विश्व समाज त्रस्त छ।
यसकारण यसको उपचार भनेको सुरक्षित तरिकाले घरमै बस्ने र सजग रहने नै हो भनिएको छ। त्यसैले त आज विश्वका अधिकांश मुलुकले ‘लकडाउन सिद्धान्त’ अपनाएका छन्।
घरमै बस्ने, सुरक्षित रहने। बाहिरी मानिसहरुसँग नजिक नहुने। नछुने। सामाजिक दूरी कायम राख्ने। मास्क लगाउने। सावुन पानीले बरोबर हात धोइराख्ने। अफवाहको पछि नलाग्ने। सूचनाहरु रेडियो, टेलिभिजन र आधारिक अनलाइनहरुबाट लिइराख्ने।
यो समय भनेको आफू पनि बच्ने र अरुलाई पनि बनाउने हो। त्यसको लागि घरमै बस्ने हो। यही सिद्धान्त अहिले विश्व समुदायले अवलम्बन गरिरहेका छन्। यसो गरी नागरिकहरुले साथ दिए भने मात्र सरकारले यस महामारी नियन्त्रणमा ल्याउन सक्छ। हाम्रो सरकारले पनि यही भनिरहेको छ।
कोरोना संक्रमण फैलने डरले नेपाल सरकारले बन्दाबन्दी ‘लकडाउन’ गरेको पनि तीन हप्ता पुग्नै लाग्यो। यो अझै बढ्ने सम्भवाना छ। गत चैत ११ गतेदेखि मुलुकमा लकडाउन गरिएको छ।
देशका अधिकांश मानिसहरु घरभित्र अर्थात घर वरपरको चौघेरामा मात्र सिमित हुनुपर्ने स्थिती आएको छ। विश्वमै स्वास्थ्य समस्याको रुपमा खडा भएको कोरोना भाइरस चीनको वुहान सहरबाट फैलिएको भनिएको छ। गत जनावरीदेखि सुरु भएको यो भाइरसले यत्ति छोटो समयमा लगभग विश्वमै कब्जा जमाएको छ। करिब एक लाख मानिसहरुको मृत्यु भइसकेको छ।
कोरोनाबाट हाम्रो जस्तो मुलुकमा फरक खाले समस्या सिर्जना भएको छ। सामाजिक प्रभाव फरक खाले परेको छ। मुलुक लकडाउनमा गएको दिनदेखि घरमै सिमित हुनु परेको छ।
गाउँघरमा रहनेहरु यो खेतीपातीको पनि सिजन भएको हुँदा परिवारका सदस्यहरु मिलेर केही खेतीपातीको पनि काम गरिरहेका छन्। तर, सहर बजारमा बस्नेहरुलाई यो सुविधा छैन। किनकी संक्रमणको जोखिम सहरी क्षेत्रमा बढी हुने हुँदा कोठा र घरभित्रै सिमित हुनुपर्ने अवस्था छ।
पर्याप्त जानकारी बिनै गरिएको बन्दाबन्दीले धेरै मानिसहरुलाई प्रभाव परेको देखियो। यहाँको मानिसहरुको सबैको आर्थिक हैसियत उही छैन। सामाजिक हैसियत उही छैन। फरक सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक पहुँच र विविध खाले समस्याको कारण मानिसहरु लकडाउन भएको केही दिनदेखि नै छट्पटाउन थालेका छन्।
नेपाल यस्तो देश भइसकेको छ कि, यहाँका अधिकांश काम गर्ने उमेरका खासगरी युवाहरु विदेशी मुलुकहरुमा पुगेका छन्। भारतबाहेक तेस्रो मुलुक पुगेकाहरु फर्कन सक्ने सम्भवाना भएन। सबैतिर बन्द भयो।
सुदूरपश्चिम भेगका मानिसहरु अधिकांश भारतमा रोजीरोटीको लागि जानुपर्ने बाध्यता उनीहरुको लागि पूख्र्यौली हो। भारतमा पनि बन्दाबन्दी सुरु भएको र खासगरी मजदूरी गर्नेहरु घर फर्कन खोज्दा सिमानाबाट मुलुक छिर्न पाएनन्, यस्तो समस्यामा पर्नेहरु अहिले सिमा क्षेत्रमा क्वारेन्टाइनमा छन्।
अन्य देशमा मात्र होइन, मुलुकभित्रै पनि मौसमी रुपमा काम, ज्यालादारी गर्नको लागि मानिसहरु एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला, सहर बजार जाने गरिन्छ। यो प्रथा पनि पराम्परादेखि नै चल्दै आएको छ।
भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा तराईं र पश्चिम तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रका जिल्लाबाट मानिसहरु कामकाजको लागि आउने जाने गरेका छन्। यस्ता दैनिक ज्यालादारी गर्ने, मजदूरी गर्नेहरु घर फर्कन नपाएर समस्यामा परेका छन्।
राजधानी काठमाडौंलगायतको ठाउँमा काम गर्ने मजदूरहरु आअफ्नो घर पर्कन नपाएर, आफूसँग भएको र कमाई गरिएको खर्च सकिएर बेखर्ची भएर हप्तौंदिन लगाएर भएपनि पैदलै जाने अठोटको साथ सडकमा हिडेका देख्यौं। सुन्यौं।
आफ्नै भुगोलमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर नपाएकाहरु अहिले परिवारबाट टाढै रहनु परेको स्थिती सिर्जना भएको छ।
कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरिय समन्वय समितिले राजधानीमा यसरी अलपत्र परेका मानिसहरुलाई दुई दिनको लागि बाहिर जान दिने निर्णय गरेको थियो। निर्णय हुने वित्तिकै अहिलेका भर्चुअल दुनियाँमा देश विदेश सूचना फैलियो।
मानिसहरुलाई सूचना थाहा पाउनको लागि रेडियो नेपाल नै सुनिरहनु पर्दैन आजकल। सूचना थाहा पाउने वित्तिकै मानिसहरु आफ्नो पोको, पुन्तुरो, झोली कसी घर फर्कन तम्तयार भए, कतिपय त बसपार्कमा पुगी टिकट काट्ने लाइनमा समेत बसे भन्ने खबर सुनियो।
तर खबर दुई घण्टा पनि टिक्न पाएन। असत्य सावित भइदियो। गृह मन्त्रालयको सूचना आयो। शुक्रबार र शनिवार सवारी चल्ने निर्णय भएको छैन। अफवाह हो। अनलानहरुमा समाचार आयो। सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्यो। समस्यमा परेका मानिसहरुको आफ्नो घर पुग्ने सपना केही बेरमै रोकियो। यस्तै छ यहाँको हाल।
यतिबेला सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको मुख्य मार गरिब, मजदूर, ज्यालादारी गरी खाने, भूमिहीन, सुकुमबासी, साहारा विहीन, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएको व्यक्तिहरुलाई बढी परेको छ। दिनभर परिश्रम गरेर बिहानी बेलुकीको छाक टार्नुपर्ने समस्यामा मानिसहरुलाएई भोकभोकै बस्नुपरेको समाचारहरु दैनिक रुपमा हामी विभिन्न मिडिया र समाजिक सञ्जालहरुमा आइरहेका देख्छौं। सुन्छौं।
यद्यपि सरकारले यसरी समस्यामा परेका परिवारलाई उचित राहत वितरण गर्नु भनेको दुई हप्ता बितिसक्दा पनि वास्तविक समस्यामा परेका मानिसहरुले राहत सामग्री पाउन सकेका छैनन्। कतिपय स्थानीय तह सूचना संकलनमै सिमित छन्। कतिपयले सुरुआत गरेका छन्, तर विवादमा छन्।
त्यती मात्र होइन, काठमाडौं लगायत ठूला सहरहरुमा मजदूरी गरी खाने सोझा सिधा नागरिकहरुले कोसँग र कहाँ गएर राहत लिने भन्ने मेसो समेत नपाएको बताइरहेका छन्। कतिपय मानिसहरु सम्बन्धित वडा कार्यालयहरुमा जाँदा समेत यहाँ होइन, आफ्नै वडामा सम्पर्क गर्नु समेत भनेका छन्।
मजदूर भन्छन्, हामी कहाँ जाउँ, गाडी चल्दैन, हिडेर जाउ पुग्न सकिँदैन। अनि यस्तो बेलामा काम नलागेको सरकार हामीलाई कहिले काम लाग्छ? उनीहरु प्रश्न गरिरहेका छन्।
राहत वितरणको काइदा फेसबुकका वालहरुमा धेरै अनौठा अनौठा देखिइरहेको छ। सरकारले राहत वितरणको कुनै पनि तस्विरहरु नलिन र सामाजिक सञ्जालहरुमा नपोस्ट्याउन निर्देशन गरेको छ। यद्यापि हाम्रो जनप्रतिनिधिहरुको फेसबुके राहत वितरण अनेक अनेकका आइरहेका छन्। कसैको निर्देशनको कुनै मतलव छैन यहाँ।
कहिँ नभएको जात्रा ….गाउँमा भने झैं देखिएको छ। एउटा साबुनको डल्लो राहतको रुपमा वितरण गर्नको लागि एक जना वडा अध्यक्षले बाँसको लठ्ठि बनाएर बीचमा चिरा बनाए। त्यसमा साबुन अड्काएर दुई मिटर पर बसेका स्थानीयलाई लौरोको सहायताले राहत वितरण गरेको तस्विर भाइरल भयो। यस्तो तस्विर हेरेर गाली गर्नेको ओइरो छ। थाहा छैन, उनलाई कस्तो अनुभूती भइरहेको होला।
अर्को तस्विर आयो, बाल्टीमा राहतको सामग्री वितरण। एक जना जनप्रतिनिधिले बाल्टीमा रहेको झुन्ड्याउने तारमा लौरेले उचाले र स्थानीयलाई परैबाट लौरोको साहताले उक्त राहत सामग्री दिइरहेका छन्। उक्त तस्विर पोष्टिएको सामाजिक सञ्जालमा गालीको ओइरो छ। थाहा छैन, उनलाई कस्तो अनुभूति भयो होला।
सरकारले लकडाउनको साइजलाई कडा गरेको छ। २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुनु भनेको केही दिनपछि त्यसलाई घटाएर ५ जनामा झारेको थियो। तर, सामाजिक सञ्जालमा कस्तोसम्म फोटो देखियो भने राहत वितरण गर्नको लागि भेला नै गरिएको। दजनौं मानिसहरुले एक जनालाई राहत वितरण गरेको देखियो।
एउटा सानो पोकोमा राहत छ। तर लर्को लाएर जनप्रतिनिधि र कर्मचारी भेला भएर हातमा हात काधँमा काध समाएर राहत वितरण गरेका छन्। अनि सबैले क्यामेरामा हेरेका छन्, विचरा लिने मान्छे ट्वाँ परेर राहतको बोरामा हेरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा अर्को यस्तो पनि तस्विर देखियो। एक जना जनप्रतिनिधिले एक बोरा राहतको चामल हस्तान्तरण गर्दै गरेको। उनले राहत लिने मान्छेलाई छोइएला झै गरेका छन्। धनुष्टंकार शैलीमा राहत वितरण गरेका छन्। दुई मिटर पर खुट्टा राखी, सकेजस्तो घोप्टोपरी तेर्सिएर चामलको बोरा हस्तान्तरण गरेका छन्। उक्त तस्विर पोष्टिएको सामाजिक सञ्जालमा गालीको ओइरो छ। थाहा छैन, उनलाई कस्तो अनुभूति भयो होला।
एक जना जनप्रतिनिधिले यसै समय अनलाइन खडा गरेछन्। त्यो अनलाइन भर्खरै भर्खरै बजारमा आए जस्तो लाग्छ। उनका केही कार्यकर्ताले त्यो अनलाइन चलाएका छन्। गाउँका मानिसहरुलाई हामीले राहत पाएनौं भन्ने समाचार/भिडियो बनाएर अपलोड गरेका छन् र समाचारको प्रभाव भन्दै घरमै लगेर चामलको बोरा राहतको रुपमा वितरण गरिरहेका छन्।
अनि त्यसको पनि भिडियो बनाइएको छ र भनिएको छ, तपाईंहरुको दुख देख्न नसकेको हुँदा हाम्रो जनप्रतिनिधिले पठाउनु भएको राहत सामग्री लिनुस्..। एक जना जनप्रतिनिधिले आफ्नो नागरिकलाई चाहेको बेला सहयोग गर्न र राहत वितरण गर्न सक्नुपर्ने हो तर, उनले यो बाटो अपनाइरहेका छन्।
थाहा छैन यो राम्रो हो या होइन। हुनत् यतिबेला सबैलाई समस्या परेको छ, राहत सामग्रीलाई एकद्वार प्रणालीबाट गरौं। स्थानीय सरकारबाट नै गर्‍यौं भनेको छ। स्थानीय तहमा आफ्नो जनप्रतिनिधि नभएको र जस कम पाइने भएको हुँदा यस्तो गरिएको पनि हुन सक्छ। त्यो उनै जानुन् तर नपाउनेहरुले भने उनको विरोध गरिरहेका छन्।
यस्ता अनेकन घटना भइरहेका छन्, सामाजिक सञ्जाल भरिएका छन्। कतिपय ठाउँमा त स्थानीयले जनप्रतिनिधिहरुलाई भन्न थालिसकेकी राहत दिएको फोटो नखिच्ने हो भने मात्र हामी लिन्छौं नत्र लिँदैनौं।
रसुवा जिल्लाको कालिका गाउँपालिकाले केही दिन अघि राहत वितरण गर्‍यो। राहत वितरण गर्नुपूर्व पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षले फेसबुकमार्फत राहत वितरणको जानकारी दिँदै राहत वितरण गरिएको फोटो नखिच्नु नखिचाउनु। र खिँचेको पनि देखिएन।
प्रधानमन्त्रीले भन्छन्, हामी कसैलाई भोकै मर्न दिँदैनौं। उनले यस्तो देशबासीको नाममा संम्बोधन गर्दै भनेका हुन। तर कार्यान्वयन खै त? यसको अनुगमन कसरी भइरहेको छ? यो बेला धैर्यता गर्ने। कोरोना भाइरस फैलिइ हाल्यो भने यसलाई कसरी नियन्त्रणमा ल्याउने भन्ने पूर्व तयारी हाम्रो सरकारसँग पर्याप्त छैन।
किनकी हामी देखिरहेका छौं, स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि आवश्यक पर्ने सामग्री र स्वास्थ्य उपकरणसमेत पर्याप्त छैन। भर्खरै खरिद गर्नको लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसैले यस्तो बेला सचेत होऔं, घरमै बसौं। लकडाउनको पूर्ण पालना गरौं।